I-XSL3 / i-160 yamanzi yokumba umgodi wamanzi luhlobo lokurhubuluza oluphezulu lwe-hydraulic ephezulu yokuqhuba kwamanzi. Oku ikakhulu kusetyenziswa ukubhola kunye nezinye izihlandlo. Ibizwa ngokuba ngumpu wentsimbi osetyenziselwa ukumba imithombo. Isebenza kakuhle emalini. Ubunzulu bokubhola buninzi yi-300m, ubukhulu bepali yokudlula ingama-330mm, kwaye amandla aphezulu okuphakamisa inkqubo yesondlo anokufikelela kwi-160kN. Kulula ukusebenza kwaye ilungele ulwakhiwo.
I-XSL7 / i-350 yokumba amanzi kakuhle sisixhobo esirhabaxa sokumba amanzi phezulu kunye nesantya sokukomba ngokukhawuleza, ubunzulu bokubhola kwe-700m, ubukhulu bokubhola ubukhulu be-500mm, kunye namandla okuphakamisa ubuninzi benkqubo yesondlo ye-350kN.